IINGCAMANGO ZEGARAJI ZOKUPHUCULA (NGAPHAMBI NANGEMVA KWEMIFANEKISO) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Iingcamango zeGaraji zokuPhucula (ngaphambi nangemva kwemifanekiso)
Eli galari lijolise kwimibono yokuphucula igaraji ukunceda ukuba uhlelwe ngakumbi. Ukugcinwa kweeshelfu, iikhabhathi zokugcina kunye nokuxhoma kunokunceda ekucoceni izinto ezingcolileyo kwaye zisetyenziselwe ukugcina izinto. Ukongeza, ukufakwa kwe-epoxy kunye ne-polyurethane flooring kungongezwa ukwenza indawo ebutofotofo ngakumbi, enomtsalane kunye nokuhlala. Apha ngezantsi uyakufumana ngaphambi nasemva kwemifanekiso ebonisa iindlela ezisebenzayo zokuhombisa nokucoca indawo yakho yegaraji.
Elinye icandelo lendlu abantu bahlala bathanda ukungahoyi ngokuqinisekileyo ligaraji. Yindawo apho sibeka khona izinto ezindala, ifanitshala, izixhobo zokusebenza, kunye nezinye izinto ezimdaka, zisenza indawo leyo ikhangeleke ngathi yindawo yokulahla inkunkuma kunegaraji eyiyo. Kodwa ukugcina igaraji icocekile kwaye iququzelelwe inezibonelelo ezingaphaya kobuhle, kwaye ngokuqinisekileyo iya kukunceda wenze ubomi bakho bube lula. Ke senza ntoni ukwenza igaraji yethu ibengcono?
Nazi izinto onokuzongeza kwigaraji yakho, kuxhomekeke kwiimfuno zakho:
Ukugcina Isithuba Izinto ezilahliweyo, izinto zangaphandle, izixhobo ezinzima kunye nezinto ezinjalo ziya kuthi ziphelele kwigaraji. Eyona ndlela yokugcina indawo icocekile kwaye iququzelelwe kukunikezela ngeendawo zokugcina igaraji kunye neeshelfu zokugcina izinto zikwindawo.
Iikhabhathi- iikhabhathi ziya kugcina indawo ikhangeleka icocekile njengoko igcina izinto ezingabonakaliyo emehlweni, kwaye ikwanceda ukuyikhusela kwimozulu
Vula amashalofu- Kwizinto ofuna ukufikelela kuzo lula, ezinje ngezixhobo zamandla, izixhobo zekhompyutha, njl. Kungakuhle ukuzigcina kwizishelufu ezivulekileyo ukuze uzifumane ngokulula. Sebenzisa izibiyeli zodonga ezinokuhlengahlengiswa kwishelufa kufanelekile, njengoko ikuvumela ukuba uhlengahlengise ubude beeshelfu njengoko kufuneka
Iibhodi zezikhonkwane kunye nodonga lwe-slat-isisombululo esikhulu sokugcina izinto ezincinci; oku kulungele izinto kunye nezixhobo ozisebenzisa rhoqo ezinje ngezixhobo zamandla kunye nezixhobo zokucoca
Izikhonkwane ezixhonyiweyo kunye neebakaki- ziluncedo ukuba unegumbi elaneleyo kwaye zilungele ukuxhoma kunye nokugcina izixhobo ezizodwa ukuba unazo njengee-kayaks, i-paddles, i-bikes, njl.
Zokuvala - ukufakwa kwegaraji kuhlala kungahoywa, ngakumbi xa singachithi ixesha elininzi kuloo ndawo. Nangona kunjalo, ukuba negaraji egalelwe kakuhle kuya kunceda ukugcina izinto kunye nezixhobo zigcinwe ngaphakathi kwimeko efanelekileyo.
Umgangatho -Kuba igaraji yindawo apho kugcinwa izinto ezinzima kunye nezinto ezinzima, ukusebenzisa izinto ezifanelekileyo zomgangatho oza kuyiphucula imeko-bume yegaraji. Umgangatho owenzelwe umsebenzi onzima njenge-epoxy, i-polyurethane, okanye idyasi efanelekileyo kumgangatho wakho wekhonkrithi, ngokuqinisekileyo iya kuphucula zombini ubuhle kunye nokusetyenziswa kwegaraji
Ukuphucula igaraji akunakubonakala kuyinto entle okanye intle njengezinye iindawo zekhaya, kodwa ngokuqinisekileyo iya kuphucula ubume bendlu obungaphaya. Ngokulula ukongeza ukugcinwa okufanelekileyo kwigaraji sele kuyiphucule kakhulu indawo. Akukho kuphinda ukhubeke kwiingcingo ezingacwangciswanga okanye izixhobo, akusekho zinto zokuwa ngokungacwangciswanga okanye iiyure ezichithwe ukhangela ibhokisi yezikrelem ozigcina kwigaraji. Ngezinye iindlela zokucwangcisa, jonga eyethu Izimvo zokugcina igaraji Isikhokelo.
Inyathelo lokuqala kukwenza uluhlu lweengxaki ngendawo ukuze uze nezimvo ezifanelekileyo zegaraji.
Iingxaki ezikule garaji zichongwa ngokulula:
iswele indawo yokugcina njengoko ubona izinto ezininzi zibekwe ngokungacwangciswanga kwindawo leyo
Umgangatho wekhonkrithi ongenanto - ikhonkrithi inamaphiko ngoko ke itsala ukufuma kunye namabala
ayinakho ukufakwa ngokufanelekileyo okunokwenza ukuba igaraji ingakhululeki ngexesha lokushushu okanye ukubanda kweenyanga.
Ukufakwa i-insulation kongezwe eludongeni ngaphambi kokuba kukhweliswe ukufakwa kwe-PVC slatwall. Izinto zokuvala izinto zinokongezwa kwifayile ye- umnyango wegaraji ngokhuseleko ngakumbi ukuba uyafuna.
Le garaji yaqala ngomgangatho wekhonkrithi ongenanto ongabonakaliyo.
Ngomgangatho ongenamthungo, imigangatho endala yekhonkrithi ithathelwe indawo yokwaleka kwe-polyaspartic, kwakha ibala kunye nomgangatho onganyangekiyo. Olu hlobo lokwaleka komgangatho nalo luyamelana neekhemikhali zazo zonke iintlobo kwaye lucoca kakuhle ngamanzi okanye ngesicoci esiqhelekileyo.
Igaraji yaqala ngodonga lwamatye olungenanto olungathandekiyo kwaye olungasebenziyo kumninikhaya.
imibono yothando lokuzalwa izimvo zakhe
Ukusombulula ukunqongophala kwendawo yokugcina, kufakwe udonga lwePVC slat. Unokuxhoma iishelufa, iibhasikiti, amagwegwe kunye nezinye izixhobo kolu donga, usenza isisombululo esiguqukayo kakhulu.
Udonga lwe-slat ngokuqinisekileyo lubonelela ngesisombululo esiguqukayo sokugcina. Uya kubona iibhasikiti, amagwegwe, izixhobo zegadi kunye nezixhobo zixhonywe eludongeni, ukuzigcina zingaphandle kwendlela, kodwa zibonakala ngokulula kwaye ziyafikeleleka.
Isambatho somgangatho we-polyaspartic sinika ukugqitywa okukodwa kwindawo, kwaye sikwabonelela ngomsebenzi onzima womgangatho wegaraji.
Usebenzisa amagwegwe, ungalutshintsha ngokulula udonga lweslate kwaye ungeze ukugcinwa okungaphezulu. Uya kulibona eli cala lodonga lide lifake i-hoop / ibhodi encinci yebhasikithi, kwaye ngokulula igcina abahambahambayo, izithuthuthu kunye nezinye izixhobo. Qiniseka nje ukuba izinto aziphazamisi ukusebenza kweefayile zakho Ukuvula umnyango wegaraji .
Imveliso egqityiweyo ngokuqinisekileyo ibonakala icocekile kwaye icwangciswe ngakumbi. Yongeze iikhabhathi zokugcina igaraji ezenzelwe umsebenzi onzima / ukusetyenziswa kwangaphandle. Esikhundleni seplywood eqhelekileyo okanye i-MDF carcass esetyenzisiweyo ekhitshini, igaraji isebenzisa iikhabhathi zentsimbi ezineengcango zekhabhathi zentsimbi ezinomlinganiso wokudibana nesibheno esibi sendawo.
Igaraji # 2
Nantsi enye igaraji enengxaki enkulu ngobunzima kunye nombutho. Apha ngezantsi siza kuchaza ezinye zeendlela umninikhaya acoca ngayo esi sithuba kwaye wazilungiselela ngcono.
Kwakhona, ukugcinwa kungumba ophambili kule garaji njengoko iswele iikhabhathi ezifanelekileyo kunye neeshelfu zokugcina izinto ezibekwe kuloo ndawo. Xa kuthelekiswa nomzekelo wangaphambili, nangona kunjalo, kugqityiwe ngcono ngenxa yoko kulula ukuyilungisa.
Emva kokufaka iiyunithi zekhabinethi yokugcina kunye nokushelisha, imeko yegaraji iphucuke kakhulu. Ngoku unendawo enkulu evulekileyo / yomsebenzi, kwaye ijongeka icocekile, ingenanto kwaye icwangciswe kakuhle. Izibiyeli zodonga zazifakelwe iishelufa ezivulekileyo, ngelixa iikhabhathi zokugcina zonke zixhonywe eludongeni, zigcina isiseko sayo sikude nomgangatho kwaye sithintela ukubonakaliswa kukufuma.
Le garaji ikwasebenzisa ikhonkrithi engenanto kumgangatho wayo, kunye neebholts zokwandisa ezibonakalayo. Nangona ukugqwesa kungcono kunomzekelo wangaphambili, ikhonkrithi engenanto ayiniki ukhuseleko olwaneleyo kwiikhemikhali, amabala, ioyile kunye neminye imonakalo eqhelekileyo kumgangatho wegaraji.
Ukugcina isibheno esirhabaxa somgangatho wekhonkrithi ekrwada, endaweni yokutshintsha ngokupheleleyo ukugqitywa komgangatho, wawusongwe nje ngepeyinti ye-epoxy. Olu lukhetho olukhulu olunokubiza igaraji yakho kumgangatho weekhemikhali, ukufuma kunye nokuchasana nebala, kunye nokwenza isiphelo esihlala ixesha elide kwimibala eyahlukeneyo onokukhetha kuyo.
Igaraji yokwenza iVidiyo ngaphambi nasemva
Ukongeza iikhabhathi zegaraji kunokuba yindlela efanelekileyo yokuhlutha izinto kwaye ikuvumele ukuba ufumane izinto ngokukhawuleza ezinje ngezixhobo, iimveliso zokucoca kunye nezinto zegadi. Ezinye iiyunithi zekhabinethi zegaraji zize zixhotyiswe ngendawo yokusebenzela ukuze ukwazi ukuba ube nendawo efanelekileyo yokugqibezela iiprojekthi ze-DIY kwindawo yakho yegaraji.
Ifana nekhabhathi yentsimbi esetyenziswe apha ngasentla, le yenye yoyilo enkulu yekhabhathi yentsimbi. Inesidumbu esenziwe ngesinyithi sonke kunye neengcango zekhabhathi zentsimbi ezibunjiweyo zeso sibheno sinomtsalane, ngokuhamba okungaphezulu kwamavili / ii-casters, ukuze ukwazi ukujikeleza izinto kwigaraji yakho njengoko kufuneka.
Fumana ulwazi oluthe kratya malunga nezi khabhathi zintandathu zokugcinwa kwentsimbi eWayfair.
Oku kukwahluka kakhulu kwiikhabhathi ezichazwe apha ngasentla. Iikhabhathi ezingaphezulu zinokuqhotyoshelwa kwi-slatwall yokuphakama okulungisekayo, ineekhabhathi ezisisiseko ezinamavili kunye neekhabhathi ezimbini ezinkulu zokugcina iiarhente zokucoca kunye nezinye izixhobo. Ikwabonisa imiphezulu yeetafile yomthi kwindawo ebanzi yomsebenzi. Cofa apha ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga ikhabhinethi yokugcina imveliso kubonisiwe apha.
Ukuba ungathanda ukwenza ubeko lwakho kukho iindidi ze Isoftware yoyilo lwegaraji ezinokukunceda ucwangcise ubeko lwakho kwaye uzame ukugcina okuhlukeneyo, imibala yepeyinti kunye nokugqiba.
[Yandisa isihloko = bonisa oovimba bolwazi swaptitle = Fihla oovimba bolwazi] Eli phepha libonisa ukwenziwa kwegaraji ( UGraham nelayiseniswe phantsi kweCC ngu: Uyilo oluqhelekileyo -Utshintsho olwenziwe luquka ukuhlela izikrini kunye nokongeza umculo. [/ Expand]
UMatador SGDIK001 Igaraji yeNdawo yokuFudumeza… $ 143.68 umthengisi ogqibelele (1744) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Genie ChainDrive 550 Garage Door Opener… $ 166.03 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1532 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Chamberlain B970T Smart Garage Door… $ 245.00$ 269.00 umthengisi ogqibelele Ifowuni (3511) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
MyQ Smart Garage Door evula Chamberlain… $ 28.98 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-38668 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
abantu kufanele ukuba babe rsvp nini nge
I-avareji yeendleko zezimbali zomtshato
Utshintsha njani igama lakho lokugqibela e-virginia
enkosi qaphela isimilo semali